Imfazwe engqubuzanayo ifumana iSikhumbuzo esinokuphikisana
UbuGcisa bobuGcisa Izakhiwo kunye noLwakhiwo
Kwi-Shadow yeSikhumbuzo saseWashington
I-Maya Lin Design of Realized, i-Vietnam Veterans Memorial kunye ne-Washington Monument. Ifoto ngu-Hisham Ibrahim / Ukhetho lwezithombe / i-Getty Izithombe (ihlanjwe)
Kwizigidi zabantu abavakatye ngamnye ngonyaka, udonga lweMaya Lin yaseVietnam yaseVietnam lukhupha umyalezo okhuselayo ngemfazwe, ubuqhawe, kunye nemibingelelo. Kodwa isikhumbuzo asiyi kuba khona kwifomu esiyibonayo namhlanje ukuba kwakungengenxa yenkxaso yabakhi bezakhiwo abaye balwela umklamo omncinci wendalo.
Ngowe-1981, uMaya Lin wayegqibe izifundo zakhe kwiYunivesithi yaseYale ngokuthatha i-seminar kwiindawo zokungcwaba. Iklasi yamkela ukhuphiswano lweSikhumbuzo saseVietnam kwiiprojekthi zabo zokugqibela. Emva kokutyelela indawo yaseWashington, DC, iifayile zeLin zathatha ifom. Uthe ukuyila kwakhe "kwakubonakala kulula, kuncinci." Wazama i-embellishments, kodwa yayiziphazamiso. "Imidwebo yayise-pastels epholileyo, imangalisa kakhulu, ibuhlungu kakhulu, kwaye ayikho yonke imifanekiso yezakhiwo."
Imithombo yale nqesi: Ukwenza iSikhumbuzo nguMaya Lin, i -New York Review of Books , Novemba 2, 2000; ISikhumbuzo seVeterans Memorial, iLebhu yeCongress; Ukubhiyozela abo bangabonakaliyo ngabakwaPaul W. Welch, Jr., i- AIA Forum , ngoFebruwari 28, 2011; Ukwenza iSikhumbuzo ngoMaya Lin, i -New York Review of Books , ngoNovemba 2, 2000 [kufumaneka kuMeyi 22, 2014]. Ukubhalisa nguJackie Craven kwiFayili yefayile ye-TIFF ifayile.
I-Maya Lin's Abstract Design Sketches
Umgca wesicatshulwa kwi-posta ye-Maya Lin yokungena kwi-Vietnam Veterans Memorial. Umfanekiso othotyelwe kwiLayibrari yeCongress Prints kunye neCandelo leZithombe, iifayile yedijithali evela kwi-original
Namhlanje xa sibheka imidwebo yeMaya Lin yeendlela ezingabonakaliyo, ngokuthelekisa umbono wakhe nento eyaba yi-Vietnam Veterans Memorial Wall, injongo yakhe ibonakala icace. Ukhuphiswano, nangona kunjalo, uLin wayefuna amagama ukuba achaze ngokuchanekileyo izimvo zakhe zokuyila.
Ukusetyenziswa kwamagama ekwakhiweni kwamagama ukubonisa intsingiselo yoyilo kubaluleke kakhulu njengento ebonakalisiweyo. Ukunxibelelana nombono, umakhi ophumeleleyo uya kusebenzisa kokubili ukubhala nokukhangela, kuba ngamanye amaxesha umfanekiso awufaneleki amagama amawaka.
Ingeniso Inani 1026: Amazwi kaMaya Lin kunye neMikhakha
I-Vietnam Veterans yeSikhumbuzo seKhuphiswano, i-Entry Number 1026, ibandakanye iingubo ezine kunye nekhasi eli-1. Umfanekiso othotyelwe kwiLayibrari yeCongress Prints kunye neCandelo leZithombe, iifayile yedijithali evela kwi-original. Khetha umfanekiso ukuvula umbono omkhulu.
Ukukhwa kweMaya Lin kwiSikhumbuzo saseVietnam saseVietnam sasilula-mhlawumbi silula. Wayeyazi ukuba wayefuna amagama ukuchazela izinto zakhe. Ukhuphiswano luka-1981 lwaluyimfihlo kwaye lubekwe kwibhodi yeposer emva koko. Ukungena 1026, okwakungumLin, kwakuquka imifanekiso echaziweyo kunye nechasi elilodwa.
ULin ushilo ukuba kuthathe ixesha elide ukuba ubhale le nkcazo kunokuba udwebe imidwebo. Wathi, "Inkcazo ibaluleke kakhulu ekuqondeni uyilo," ekubeni isikhumbuzo sasebenza ngaphezulu kwinqanaba lomzwelo kunqanaba elisemthethweni. " Yiloo nto athethayo.
Inkcazo yeLay One:
Ukuhamba ngendawo efana nepaki, isikhumbuzo sibonakala njengomququzelayo emhlabeni - udonga lwamatye omnyama, oluthuliweyo olude, olusuka phezulu luya emhlabeni. Ukusondela kwisikhumbuzo, izithambeka zomhlaba ngokukhawuleza, kunye neendonga ezisezantsi zivela ngapha nangapha, zikhulayo emhlabeni, zandisa kwaye ziguqule kwizinga elingezansi nangaphambili. Ukuhamba kwisiza esinezityalo eziqulethwe yiindonga zesi sikhumbuzo, singakwazi ukwenza amagama aqoshiwe kwiindonga zesikhumbuzo. La magama, abonakala engapheliyo kwinani, adlulisela ingqiqo yamanani amaninzi, ngelixa uhlanganisana nala bantu ngokubanzi. Kuba esi sikhumbuzo asibheki njengesikhumbuzo kumntu, kodwa kunokuba isikhumbuzo samadoda nabasetyhini abafa ngexesha lemfazwe, ngokubanzi.
Isikhumbuzo asihlanganiswa njengesikhumbuzo esingatshintshiyo, kodwa njengobunjwa obuhambayo, ukuba siqondwe njengoko singena ngaphakathi nangaphandle kwayo; kwindinyana ngokwayo ihamba ngokukhawuleza, inzala iya kwimvelaphi ephosakeleyo, kodwa imvelaphi leyo intsingiselo yesi sikhumbuzo kukuqonda ngokupheleleyo. Kwinqanaba leendonga, ngakwesokunene, kule ngxondorha yecala idutywe umhla wokufa kokuqala. Kulandelwa ngamagama abo bafa kwimfazwe, ngokulandelelana kwexesha. La magama aqhubeka kulolu donga, ebonakala ehlala emhlabeni ekupheleni kwodonga. Amagama aphinde abuyele eludongeni lwesobunxele, njengoko udonga luvela emhlabeni, luya phambili kwimvelaphi, apho usuku lokufa lokugqibela lubekwe, ngaphantsi kwelo donga. Ngaloo ndlela isiqalo semfazwe kunye nokuphela sidibana; imfazwe "igqibeleleyo", isalathisi esigcwele, kodwa isaphuliwe ngumhlaba obophe uhlangothi oluvulekile, kwaye luqulethwe emhlabeni. Njengoko siphenduka sishiya, sibona ezi ndonga zisuka kude, zisiqondisa kwiSikhumbuzo saseWashington ngakwesobunxele kunye neSikhumbuzo saseLincoln ukuya ngasekunene, ngaloo ndlela sizisa iSikhumbuzo saseVietnam sibe yimeko yembali. Thina, abaphilayo baziswa ekuqinisekiseni ukufa kwezi zifo.
Ukuveliswa ekuqapheliseni okubukhali malunga nokulahleka, kuya kumntu ngamnye ukuba asombulule okanye angene ngokuhambelana nale ntlupheko. Kuba ukufa kupheliseni umcimbi womntu kunye nobucala, kwaye ummandla oqulethwe kule sikhumbuzo yindawo enokuthula efuna ukucinga kunye nokuzimela kwangasese. Iindonga ezimnyama ze-granite, ngamnye ngamamitha angama-200 ubude, kunye neenyawo ezili-10 ngaphantsi komhlaba kwindawo ephantsi kakhulu (ngokunyuka ngokunyukayo ukuya kumgangatho womhlaba) ngokufanelekileyo isebenza njengesithintelo esivakalayo, kodwa ziphakamileyo kunye nobude obunjalo ukuze zingabonakali zisongela okanye zivalwe. Indawo eyona ndawo ivulekile kwaye ingacacanga, ivumela ukuba ingqondo yabucala kunye nokukhanya kwelanga kwimeko yokukhunjulwa kwintshonalanga kunye nepaki enobungqongileyo kunye nodonga lwayo lunegalelo ekuhlaleni kwendawo. Ngaloo ndlela isikhumbuzo siyabaswelekileyo, kwaye ukuba sikhumbule.
Imvelaphi yesikhumbuzo isondele malunga nendawo yeli sayithi; nganye imilenze ijikeleza i-Monument yaseWashington kunye neSikhumbuzo saseLincoln. Iindonga, eziqulethwe kwelinye icala ngehlabathi zingamawaka angaphantsi kwe-10 ngaphantsi komhlaba kwindawo yazo, zize zinciphise ukuphakama, zize ziphele ngokupheleleyo kwihlabathi ekupheleni kwayo. Iindonga kufuneka zenziwe nge-granite emnyama, ephosiweyo, enegama elichongiweyo kwi-Trojan yileta elula, i-3/4 intshi ephakamileyo, evumela iisentimitha ezilishumi ubude kwigama ngalinye. Ukwakhiwa kesikhumbuzo kukubandakanya ukuhlaziya umda kumda wodonga ukwenzela ukuba unikezele ukuba kufumaneka lula, kodwa ubuninzi beziko kufuneka kushiywe kungafunyanwa (kuquka imithi). Ummandla kufuneka wenziwe ipaki ukuze wonke umntu uluntu.
Ikomidi elikhethileyo icebo lakhe lalingenakunqikaza. Ingxaki ayizange ibe neengcamango ezintle kunye neengxaki zikaLin, kodwa imidwebo yakhe yayingacacanga kwaye yayingenangqondo.
Ifom yefomethrikhi ye-geometric ifowuni esuka kwi-posta ye-Maya Lin yokungena kwi-Vietnam Veterans Memorial. Umfanekiso othotyelwe kwiLayibrari yeCongress Prints kunye neCandelo leZithombe, iifayile yedijithali evela kwi-original
Emuva kuma-1980, uMaya Lin akazange afune ukufaka ukhuphiswano lokwakha iSikhumbuzo saseVietnam. Kuye, ingxaki yoyilo yiprojekthi yeklasi kwiYunivesithi yaseYale. Kodwa wangena, kwaye, ukusuka ku-1,421 ukuhanjiswa, ikomiti yanyula i-Lin design.
Emva kokuphumelela ukhuphiswano, uLin wagcina i-firm firm yase-Cooper Lecky Architects njengomqambi wengxelo. Kwakhona uncedwa ngumcebisi / umculi uPaul Stevenson Oles. Bobabini i-Oles kunye neLin babenelise iziphakamiso zeSikhumbuzo esitsha saseVietnam eWashington, DC, kodwa umdla wekomiti wawuyi-Lin design.
USteve Oles wabuyela ekungeneni kukaMaya Lin ukucacisa injongo yakhe kwaye achaze ukungeniswa kwakhe. U-Cooper Lecky wanceda i-Lin ukulungiswa kwemfazwe yokulungiswa kunye nezixhobo. UBrigadier Jikelele uGeorge Price, umbutho jikelele weenkwenkwezi zaseAfrika-waseMelika, uvikela uluntu ukhetho olumnyama. Ukuphazamiseka kokubakho ukudibanisa okugqityiweyo kwagqitywa kwenzeka ngoMatshi 26, 1982.
UMaya Lin we-1982 Memorial Design
I-Vietnam Veterans Memorial eWashington, DC Iifoto nge-mike iifoto zokumnyama / i-Moment / i-Getty Izithombe (ihlanjwe)
Emva kokuqhekeka komhlaba, kwagqitywa ngakumbi. Ukubekwa kwesithombeni kwakungeyona inxalenye ye-Lin design, kodwa amaqela omculo ayedinga isikhumbuzo esivamile. Phakathi kwempikiswano evuthayo, ngoko uMongameli we-AIA uRobert M. Lawrence waphakamisa ukuba isikhumbuzo sikaMaya Lin sinamandla okuphulukisa isizwe esahlukileyo. Ukhokela indlela eya kwi-compromise eyayilondoloze uyilo lwangaphambili ngenkxaso kunye nokubekwa kweendawo eziqhelekileyo ezichasene nabaphikisi.
Imikhosi yokuvula yenzeke ngoNovemba 13, 1982. "Ndicinga ukuba imimangaliso eyakhayo," kusho uLin.
Kuba nabani na ocinga ukuba inkqubo yokwakha izakhiwo zilula, cinga ngomntwana omdala waseMaya. Ukuqulunqa okulula kuninzi kunzima kakhulu ukubonisa nokuqonda. Emva koko, emva kweemfazwe zonke kunye nokunciphisa, uyilo lwenziwa kwimeko eyakhelwe.
Kwakuyinto engaqhelekanga, ukuba ube nombono owawuwakho kuphela ukuba awuseyona nxalenye yengqondo yakho kodwa uluntu ngokupheleleyo, akusekho. -Maya Lin, 2000
Ukubona imizobo kaPaul Stevenson Oles, yiya kwiZidwebo ze-Vietnam Veterans Memorial kwiThala leeNcwadi yeCongress
Funda kabanzi ngoRobert M. Lawrence, FAIA: Ukubhiyozela abo bangabonakaliyo yiPaul W. Welch, Jr., iForam ye-AIA , ngoFebhuwari 28, 2011.
Indlela Abadibanisi Ababhalwa Ngumculi Wamatye kunye noRebecca Damron, uRoutledge, 2012
Imida kaMaya Lin, uSimon & Schuster, ngo-2006. Kule ncwadi, umakhi wachaza indlela yakhe yokudala aze axoxe ngoko kwenzeka ntoni emva kokuba umklomelo wakhe wokubambisana wayekhethwa kwiSikhumbuzo seVeterans.
I-Maya Lin - Umbono ocacileyo ocacileyo , obhaliweyo kunye no-Freida Lee Mock (iDVD)
Izakhiwo zeBinoculars eVenice, CA
IFlorida Southern College - Iziqendu zikaWright
Andrea Palladio - I-Renaissance Architecture
Izakhiwo eziMnandi kunye neeZakhiwo eziPhezulu
Arena Architecture kunye neNkundla
I-Central Central Terminal e-NYC - Imbali emfutshane
Ngokumalunga neHolo leSixeko sase-Oslo eNorway
I-Architecture eTexas - Thatha Ukujonga
Indlela i-Louisiana Superdome yazisindisa ngayo ubomi
I-Norman Foster Architecture Portfolio
ICopal, iGazi leMithi: Umthombo ongcwele weMaya kunye ne-Aztec Incense
Imifanekiso yabasetyhini abaselula kwi-"Inkohlakalo yentliziyo" UMthetho 1
UJennifer Knapp Umculi wezoBomi
Ukuqhagamshelana phakathi koMthetho wokuLawula iziBhamu kunye noBundlobongela baseGundwini
Inkqubo yeShayina yaseHukou
UNancy Astor: Umfazi wokuqala ohleli kwiNdlu yeeNgingqi
Imfazwe YaseMerika Yomkhosi: I-Battle of the Wilderness
I-Cheesy Iingcaphulo Zothando Uze Ungaphumi Kwefashoni
Ngokuba 'On Est Allé,' Isivumelwano siKhetha, Unokukhetha
Iimvalo ezikhawulezayo ze-Kentucky Derby
I-SAFER yenza ikhuselekile ukuhamba kwindawo
Imiba yePhuctuation: 'Ithandelo likaJohane' kunye ne-2-Million-Dollar Comma
Iintlobo ezahlukeneyo zeeGrafu
IMfazwe Yehlabathi I Isiqendu Ukususela ngo-1914 ukuya ku-1919
Imifanekiso kwi-Art ngokusekelwe kwi-Odyssey